Qalabka soosaarka kuleylka ee 'infrared' Manufacturers | Shiinaha Module-kaamerada kululeynta alaab-qeybiyeyaasha & Warshad
Shenzhen Dianyang Ethernet SR taxanaha kamarada kuleylka ee infrared waa sawir-qaade cabbir yar oo radiometric infrared infrared. Wax soo saarku wuxuu qaataa qalabka wax lagu baaro ee dibada laga keeno, oo leh hawlgal xasiloon iyo waxqabad aad u fiican. Waxay ku qalabeysan tahay algorithm cabbirka heerkulka gaarka ah iyo is-dhexgalka adeegsadaha si fudud loo adeegsado. Way yartahay cabirkeedu, miisaanka ayuu ku yaryahay oo wuxuu ku hodan yahay isdhexgalka. Waxay ku habboon tahay xakamaynta tayada, kormeerka isha kuleylka, aragtida habeenkii ee amniga, dayactirka qalabka iwm
Qaraarka: 256 × 192
Meel Pixel: 12μm